Kediskii dugsiyada sare ee Puntland oo maraya heer gabo gabo ah | Golis Telecom Somalia
Kediskii dugsiyada sare ee Puntland oo maraya heer gabo gabo ah
Tartanka Kediska Ramadaan ee dugsiyada sare ee Puntland ayna maalgaliso shirkadda Golis ayaa maraya heer gabo gabo ah waxana isugu soo haray kama dambaysta labada dugsi ee Azhar Qardho iyo Alwaaxa Garoowe.
Tartankan oo lagu magacaabo Tartan iyo Tacliin kana baxa idaacadda Daljir ayaa waxaa iyaguna caawa kaalinta 3aad ku tartamaya dugsiyada Dugsiyada kala ah Baargaal Secondary iyo Nageeye Kalabayr kuwaas oo kii badiya uu gali doono kaalinta 3aad ee Tartan iyo Tacliin.
Munaasabad xalay lagu qabtay xarunta idaacadda Daljir ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis Sheikh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur iyo gudoonka waxbarashada dagmada Boosaaso Mudane C/laahi Xasan Abshir Cadami iyagoo kalmado ay ka jeediyeen ugu hambalyeeyay dhamaan dugsiyadii ka qayb galay barnaamijka.
Shiekh Fu’aad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa ku dheeraaday muhiimadda Barnaamijkan uu u leeyahay bulshada ayna shirkadda Golis u galisay hantida faraha badan waxa uuna xusay in si wayn looga faa’iiday intii uu socday ayna sii wadi doonaan maadaama uu qayb ka yahay isbadalka aqooneed ee ka socda dalka lagulana dagaalamayo jahliga.
Si kastaba ha ahaatee waxaa laga dhursugayaa dugsiga noqda horyaalka tartan iyo tacliin sanadkan kaas oo dhex yaal labada dugsi ee Azhar Qardho iyo Alwaaxa Garoowe.
C/naasir Siciid Maxamed
Qaybta saxaafada waaxda xiriirka dadwaynaha